Ọ dịghị onye ma ọ bụ onye ọbụla nwere ike ikwu na ya na Chineke ịgwa ndị ọzọ okwu; Anyị ezughị ike banyere ndị ọzụzụ atụrụ niile ahụ ihere na mmadụ nke Chineke; ha amaghi ihe ha na ekwu, ha amaghikwa akwukwo nso | KONGOLISOLO
Bible doro nnọọ anya: Chineke Achọghị onye ọ bụla ga-agwa anyị okwu. Dịka anyị nwere ike ịgụ nke a n'ụzọ doro anya na n'ụzọ a na-ekwujọghị akwụkwọ site na akwụkwọ nke nnukwu onye amụma Aịsaịa:
Onye nyochaworo mmụọ nke Onye nwe, onye nweburu nye ụfọdụ ndumodu?
Hasnye meworo ka ọ nata ndụmọdụ?
Evernye kụziiri ya ụzọ ezi omume?
Nye kuziere ya amam-ihe, ma onye meworo ka ọ mata ụzọ ọgụgụ isi? (Aịsaịa 40 amaokwu 13 na 14).
Onye ọ bụla nwere ahụmịhe pụrụ iche na nke ya na Chineke. Chineke, ọ maghị gị?
Amabeghi ebe o ghaghi ihu gi?
Amaghi na ihe gi choro ma choo?
Dika ekere onye obula n’oyiyi nke Chineke, obughi ha nile bu umu Chineke?
Ọ bụ na mmadụ niile enweghị ike ịgakwuru ya n’enweghị nsogbu dị n’etiti?
Naanị Chukwu nwere ike ịgwa nwatakịrị nọ n’afọ nne ya ka o chigharịrị ka ọ dị mfe ọpụpụ. Naanị ya maara ọnụọgụ ntutu dị n'isi gị, ọnụ ọgụgụ kpakpando dị na mbara igwe, ọnụ ọgụgụ ájá dị n'oké osimiri.
Nye na-egbochi Chineke ịgwa anyị okwu ??
Onye mechiri ọnụ ya?
Kedu onye ga-enweta nyocha a?
Onye nwere ike nke ya ??
Na ndị mmadụ na-akpọ onwe ha nwere ọgụgụ isi, mana ha enweghị ike iche echiche.
Ọbụna nnekwu ọkụkọ ahụ maara na Chineke achọghị onye ọ bụla iji nyere ndị ọzọ aka.
Ndi ozuzu aturu a na ndi obi ha na adighi ntukwasi obi ka nwere isi ha na n'anya ha… Ọbụnadị ọchị na-ahụ ha ihe ọchị ... akpa ọchị !
Aug07 05: 52